Xukuumadda Soomaaliya oo ka digtay in la boobo hantida qaranka – Qaranimo Online
You are here: Home 2016 May 11 Xukuumadda Soomaaliya oo ka digtay in la boobo hantida qaranka
Xukuumadda Soomaaliya oo ka digtay in la boobo hantida qaranka
Muqdisho, May 11, 2016: Ayadoo Soomaaliya gashay marxalad kala guur ah, lana filayo in dhamaadka sanadkan uu dalka ka dhaco is bedel, marka la gaaro doorashooyinka ayaa Xukuumadda Soomaaliya waxay ka digtay in la boobo hantida qaranka.
Maxamed Cumar Carte, Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya, ayaa uga digay Mas’uuliyiinta dowladda in aysan ka faa’ideysan kala guurka, loona baahan yahay in hantida qaranka ay ilaaliyaan.
Rw/ ku xigeenka ayaa sheegay in hantida umadda aan la xalaaleysan karin, isla markaana cid walba lala xisaabtamayo, isagoo ku baaqay in lagu fara adeego hantida iyo mas’uuliyada la haayo, si looga fogaado wax lunsi iyo tuugaysi.
Dadka falanqeeya siyaasada Soomaaliya ayaa ka digaya in xilliga kala guurka ee la galayo ay xubnaha dowladda ee hada xilalka haya ka faa’ideystaan, hantida qarankana loo adeegsado arrimo kale, sida doorashooyinka oo kale.
Strategic partnership basis of Turkish-Somali cooperation. October 28, 2017
Wasiir Bayle“Abuukar Looxow wuxuu Wasaaradda u hayey shaqo muhiim ah, mana hilmaami doono” May 14, 2017
AMISOM oo ka hadashay qarxii Muqdisho ka dhacay September 29, 2017
Turkish company Favori turns around fortunes at Aden Adde Abdulle Airport October 14, 2015